समृद्ध भविश्यको योजना जीवन बिमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
समृद्ध भविश्यको योजना जीवन बिमा
मृत्यु शास्वत सत्य हो, जन्मे पछि मर्नै पर्छ, तर हामीलाई मृत्यू शब्द सुन्नु नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । मृत्यु सधै पीडादायी हुन्छ,जानेलाई कतिगाह्रो हुन्छ होला अन्तिम अवस्थामा देखिने छटपटिबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, तर जानेलाई भन्दा बाँचेका परिवार, आफन्त र साथीभाईहरुलाई यसले पीडा दिन्छ र बिह्वल बनाउँछ।
एक जनाको मृत्युले धेरै जनाको काममा बाधा व्यवधान पुग्दछ । परिवारका सदस्यहरुलाई त लामो समय सम्म काममा फर्कन गाह्रो हुन्छ । अझ कमाएर परिवार पाल्ने मुख्य व्यक्तिलाई गुमाउनु पर्यो भने त त्यस पछि आउन सक्ने कहाली लाग्दो बिपत्तिको त कल्पना गर्दा नै आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ । साधारण कम आय भएका परिवारलाई मात्रहोइन, आर्थिक रुपमा सबल देखिने परिवारलाई पनि त्यो अबस्थाबाट पार लाग्न कठीन हुन्छ।
एकातिर आफ्नो मान्छे गुमाउनु पर्दाको पीडा, अर्को तर्फ गाडीको मासिक किस्ता, घर किनेको छ भने मासिक तिर्नु पर्ने मोरगेज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता। मासिक किस्ता तिर्न सकिएन भने गाडी कम्पनीले फिर्ता लैजाला भन्ने डर, बसीरहेको घर बैंकले ताला लगाउला भन्ने छटपटी, अनि अपार्टमेन्ट खोज्ने चटारो। अपार्टमेन्ट भेटिएला फेरी सेक्युरिटी डिपोजिट, अग्रिम भाडा आदि जोड्दा ठूलै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ।
अमेरिकामा नेपालीहरुको उपस्थिति बाक्लिने क्रम संगै नेपालीहरुको यहाँ मृत्युहुने क्रमपनि बढेको छ । त्यस्तो हप्ता भेटाउन गाह्रो छ जसमा नेपालीको मृत्यू अमेरिकामा नभएको होस् । यस्तो परेको बेला हामी गोफण्ड वा अन्य तरिकाबाट सहयोग संकलन गर्छौ अनि पार्थीव शरीर नेपाल पठाउन वायहीं सतगत गर्न सहयोग गर्छाै । सबैलाई यस्तो सहयोग आबश्यक नहुन पनि सक्छ । अहिलेको अवस्थामा यस्तो गर्नु हाम्रो लागि बाध्यता हो जसले मृत शरीरको सतगत गर्न त शंभव बनाउँछ तर आश्रित परिवार माथि बजे्रको बज्रपातको घाउमा मलहम पट्टी लगाउन भने सक्दैन । सोंचौं त मानवीय क्षतिको पूर्ति गर्ने कुनै उपाय नभए जस्तै के आर्थिक क्षतिको पूर्ति गर्ने पनि कुनै उपाय छैन ?
छ अवश्य छ, समय मै थोरै मात्र साबधानी अपनाइयो भने चन्दा उठाउने झन्झटबाट मुक्त भइने मात्र होइन परिवारमा आइ पर्न सक्ने आर्थिक संकटबाट पनि सजिलै मुक्तहुने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ, त्यस्तो उपाय हो Life Insurance लिने, समुदायमा यसको आवश्यकता र महत्वबारे चेतना फैलाएर सबैलाई लिन अभिप्ररित गर्ने ।
के हो त Life Insurance ?
Life Insurance लिनुको प्रथम उद्देश्य सुरक्षा हो ताकि केही भएमा परिवारलाई आर्थिक संकट नपरोस्। दोश्रो उद्देश्यहो भविष्यको लागि बचत Life Insurance दुई प्रकारका हुन्छन, Temprory/ Permanent. Term Life निश्चित अवधिको लागि गरिन्छ भने Permanent जीवनभरको लागि। स्थाई अन्तर्गत Whole Life, Custom Whole Life, Universal Life आदि आउँछन ।
यस्तो Inurance को Premium अत्यन्त कम हुन्छ र निश्चित समयाबधिको लागि गरिन्छ । दुइ चार लाखको Inurancesf Premium महिनामा १०÷२० डलर तिरे पुग्छ। उमेर स्वास्थ्यको आधारमा त्यो भन्दा कम वा बढी हुन सक्छ। यसमा क्यास भ्यालु जम्मा हुँदैन । बिमितको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले Death Benefit प्राप्त गर्दछ । Terminal Illness भएमा आफै झण्डै Face Amount बराबरको रकम निकाल्न सकिन्छ (यो प्राबधान सबै कम्पनीमा नहुनपनि सक्छ) ।
यो जीवनभरको लागि हुन्छ । यसमा क्यास भ्यालु जम्माहुने भएकोले प्रिमियम पनि बढी हुन्छ (Term Life को तुलनामा) । Term Life गरिएको Whole Life नै हो जसमा आफ्नो योजना र सुविधाअनुसार कतिवर्ष Premium तिर्ने भनेर निश्चित गरिन्छ, Whole Life Policy लाई भविष्यको लागि बचत योजना पनि भन्न सकिन्छ । यस्तो Policy भएमा थोरै थोरै गरेर बचत गरी जम्मा भएको क्यास भ्यालु निकालेर छोरा छोरीको पढाई, बिवाह, ब्यापार उद्योग आदिमा खर्च गर्न सकिन्छ अथवा बुढेसकालमा एकमुस्ट वा पेन्सनको रुपमा लिएर पनि आफ्नो मृत्युपछि परिवारको लागि Death Benefit को रुपमा रकम प्राप्त गर्नै व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
यसमा Term Life मा जस्तै Terminal Illness भएको अवस्थामा आफैले झन्डै Face Amount बराबरको रकम प्राप्त गरी उपचार वा अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि खर्च गर्न सकिन्छ। त्यस बाहेक Chronic Care/Illness Rider को माध्यमबाट लामो समय स्याहार सुसार आवश्यक पर्ने अवस्था आइपरेमा सोको व्यवस्थापनको लागि Daily Living Activities (Activities that people tend do every day without needing assistance. There are six basic ADLs: eating, bathing, dressing, toileting, transferring (walking) and continence) मध्ये कुनै २ कृयाकलाप गर्न नसक्ने अवस्थामा यस्तो इन्स्युरेन्सबाट दैनिक साप्ताहिक वा मासिक रुपमा रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ Chronic Care/Illness अहिले क्यालिफोर्नियामा उपलब्ध छैन। Terminal Illness/ Chronic Care/Illness लिन पाइने व्यवस्था सबै कम्पनीमा नहुन पनि सक्छ ।)
एक अर्काे महत्वपूर्ण फाइदा While Life Insurance बाट प्राप्त हुने Cash Value Credit Risk Free हुन्छ अर्थात कर्जा लिएको र बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दाताले अन्य जाएजेथामा जस्तो यस्तो रकममा दाबी गर्न पाउँदैन ।
यो Permanent Policy हो जसमा Whole Life मा भन्दा Premium कम हुन्छ, क्यास भ्यालु पनि जम्मा हुन्छ र Premium पनि कहिले कम कहिले बढी गरेर पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । यसलाई Term / Whole Life को मिश्रित Policy को रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ।
Business मा संलग्न व्यक्तिले के कस्ता योजनाबाट फाइदा लिन सकिन्छ?
व्यवसाय गर्दा मुख्य चिन्ता लिइने विषय भनेका कसरी बढी फाइदा गर्ने र बिकट परिस्थितिमा कसरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने भन्ने नै हुन। अर्को चिन्ताको विषय हो निबृत जीवनको लागि श्रोतको व्यवस्था। सरकारी, गैह्र सरकारी, कम्पनी तिर काम गर्नेहरुले पेन्सन प्राप्त गर्दछन्।
संचयकोष जस्तो 401 पेमा जम्मा भएको रकमलाई एकमुष्ट वा पेन्सनको रुपमा लिन सक्छन्। व्यवसायको त्यस्तो योजना नहुने र व्यवसायबाटै लिउँला भनि पर्खी बस्दा व्यवसाय सधै फाइदा मै जाने कुरा पनि निश्चित नहुने भएकोले निवृत्त जीवनको चिन्थाहुनु स्वाभाबिक हुन आउँछ । यी कुराहरु व्यवस्थापन गर्नका लागि बिभिन्न उपायहरु छन्, जस्तै
Key Employee Insurance
Buy Sell Agreement
कस्तो Policy लिनु उपयुक्त हुन्छ त ?
अमेरिकामा अहिले Cash Value Insurance लाई Supplimental Retirement Income को रुपमा प्रयोग गर्ने चलन बढी रहेको छ ।
जसले रोजगारदाताबाट Retirement/Pension एबिल प्राप्त गरेका हुन्छन् उनीहरुका लागि Supplimental Retirement Income भएपनि रोजगारदाताबाट त्यस्तो योजना प्राप्त नभएकाहरुका लागि Retirement/Pension एबिलको लागि उपयुक्त उपाय हुन सक्छ। त्यसैले रोजगारदाताबाट Retirement/Pension एबिल नभएकाहरुका लागि Cash Value Insurance लिनु अझ बढी आवश्यक देखिन्छ ।
Term Insurance लिनु डेरामा बसे जस्तो हो भने Permanent Insurance लिनु घर किने जस्तो । थोरै तिरेर डेरामा बसे जस्तो गरी आबधिक लिने कि घर किनेर बुझाएको रकमलाई पूँजीकरण गरे जस्तै गरी अलि बढी जम्मा गरेर Permanent Insurance लिने भन्ने कुरा राम्रोसंग बुझेर आफ्नो आम्दानी, परिस्थिति र भविश्यको योजनाको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दछ ।
Insurance को Premium स्वास्थ्य र उमेरको आधारमा निश्चित गरिने भएकोले कम उमेरमा कुनै दीर्घ रोगहरुले आक्रमण गर्न नभ्याउँदै गर्न सकियो भने कम Premium तिरेर पनि ठूलै रकमको Premium गर्न सकिन्छ । जति बढी उमेरमा शुरु गरियो त्यति बढी Insurance तिर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घ रोगहरु लागि सकेको अवस्थामा बढी Insurance तिर्नुपर्ने मात्र होइन कि Insurance नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
Life Insurance गर्दा हुने एउटा अप्रत्यक्ष फाइदा स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन सहयोग पुग्नु पनि हो । Insurance रकमको आधारमा Insurance गर्ने व्यक्तिको Risk पत्ता लगाउनका लागि Insurance Company ले निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गर्दछन जसबाट रोग पत्ता लागेर जीवन बाँचेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन्।
Insurance कम्पनीहरुमा बच्चाको लागि Education/ college Funding, Home Owner हरुका लागि Mortgage Protection व्यापारी, कारोबारीहरुका लागि Business Protection सबैका लागि Retirement एबिल जस्ता धेरै योजनाहरु हुने भएकोले सम्बन्धित बिषयको ज्ञातासंग सल्लाह गरेमा समृद्ध भविश्यको योजना बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
(लेखक लामो समयदेखि जीवन विमा र स्वास्थ्य विमाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ ।)